၁ မိုင်မှာ ပေပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မဖြေနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အိုင်းစတိုင်း…. – ရှအေလငျး
၁ မိုင်မှာ ပေပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲဆိုတဲ့ မေးခွန်းကို မဖြေနိုင်တဲ့ ကမ္ဘာကျော် အိုင်းစတိုင်း….
တခါမှာ ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး အဲလ်ဘတ်အိုင်းစတိုင်းကို သတင်းထောက်တွေက မေးခွန်းတခု မေးတယ်။မေးခွန်းက လွယ်လွယ်လေးပါ။ ၁ မိုင်မှာ ပေပေါင်း ဘယ်လောက်ရှိသလဲတဲ့။ အိုင်းစတိုင်း မဖြေနိုင်ပါဘူး။ မူလတန်းကျောင်းသားတယောက် လွယ်လွယ်ကူကူ ဖြေနိုင်တာလေးကိုတောင် ကမ္ဘာကျော်သိပ္ပံပညာရှင်ကြီး မဖြေနိုင်ဘူးဆိုပြီး သတင်းထောက်တွေက သူ့ကို ဟားတိုက်လှောင်ပြောင်ကြတယ်။ အိုင်းစတိုင်းက သူတို့ကို ခုလို ပြန်ပြောလိုက်ပါတယ်။
“ဒီမေးခွန်းရဲ့ အဖြေကို ငါ မသိဘူး။ သိစရာလည်း မလိုဘူး။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ အဲဒီအဖြေကို သင်္ချာစာအုပ်မှာ တမိနစ်အတွင်း ရှာလို့ရတယ်။ ဒီလို လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာလို့ရတဲ့ အကြောင်းအရာကို ငါ့ခေါင်းထဲမှာ ဘယ်တော့မှ ထည့်မထားဘူး”တဲ့။
ကမ္ဘာပေါ်မှာ မော်တော်ကားကို ပထမဆုံး တီထွင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ မီလျံနာသူဌေးကြီး ဟင်နရီဖို့ဒ်ကို ချီကာဂိုထရီဘွန်းသတင်းစာကြီးက “နလပိန်းတုံး” လို့ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့လို့ သူဌေးကြီးဖို့ဒ်က သတင်းစာတိုက်ကို တရားစွဲပါတယ်။ တရားရုံးတော်ရဲ့ တရားခွင်မှာ သူဌေးကြီးက သတင်းစာတိုက်က သတင်းထောက်တွေကို သူ့ကို ‘နလပိန်းတုံး’ ‘ဘာမှ မသိသူ’ လို့ ရေးသားဖေါ်ပြခဲ့တာ မှန်ကန်ကြောင်းကို သက်သေပြခိုင်းပါတယ်။ သတင်းထောက်တွေက သူဌေးကြီးကို လူတိုင်းနီးပါး ဖြေနိုင်တဲ့ ခုလို မေးခွန်းလေးတွေ မေးကြတယ်။
“အမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့ ပထမဆုံးဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟာ ဘယ်သူလဲ” “အမေရိကန် ပြည်တွင်းစစ် ဘယ်နှခုနှစ်မှာ စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့သလဲ” စတာတွေပါ။
ဒီအဖြစ်အပျက်နှစ်ခုဟာ ကျွန်တော်တို့ကို မှတ်သားစရာ အသိနှစ်ခု ပေးခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါတွေက (၁) ဦးနှောက်ဆိုတာ အချက်အလက်တွေကို သိုမှီးသိမ်းဆည်းထားရမယ့်နေရာ မဟုတ်ပါ။ စဉ်းစားတွေတောအကြံထုတ်ရမယ့် နေရာပါ (၂) စာအုပ်ထဲမှာ လွယ်လွယ်ကူကူ ရှာလို့ ရတဲာ့ အချက်အလက်တွေကို ခေါင်းထဲမှာ သိမ်းမထားပါနဲ့။ မလိုတာတွေ မှတ်ထားတာများလာရင် ဦးနှောက်ဟာ မတွေးတတ် မစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး။
(ဗန်းမော်သိန်းဖေ) အရမ်းလေးစားပါတယ်ဆရာ။ ဆရာ့စာတွေ နှစ်သက်ရင် ဆရာ့စာအုပ်များ ၀ယ်ယူအားပေးကြပါ။
တခါမှာ ကမ်ဘာကြျောသိပ်ပံပညာရှငျကွီး အဲလျဘတျအိုငျးစတိုငျးကို သတငျးထောကျတှကေ မေးခှနျးတခု မေးတယျ။မေးခှနျးက လှယျလှယျလေးပါ။ ၁ မိုငျမှာ ပပေေါငျး ဘယျလောကျရှိသလဲတဲ့။ အိုငျးစတိုငျး မဖွနေိုငျပါဘူး။ မူလတနျးကြောငျးသားတယောကျ လှယျလှယျကူကူ ဖွနေိုငျတာလေးကိုတောငျ ကမ်ဘာကြျောသိပ်ပံပညာရှငျကွီး မဖွနေိုငျဘူးဆိုပွီး သတငျးထောကျတှကေ သူ့ကို ဟားတိုကျလှောငျပွောငျကွတယျ။ အိုငျးစတိုငျးက သူတို့ကို ခုလို ပွနျပွောလိုကျပါတယျ။
“အမရေိကနျနိုငျငံရဲ့ ပထမဆုံးဗိုလျခြုပျကွီးဟာ ဘယျသူလဲ” “အမရေိကနျ ပွညျတှငျးစဈ ဘယျနှခုနှဈမှာ စတငျဖွဈပှားခဲ့သလဲ” စတာတှပေါ။ သူဌေးကွီးဟာ ငယျစဉျက ကြောငျးမနခေဲ့ဖူးလို့ အဲဒီမေးခှနျးတှကေို မဖွနေိုငျပါဘူး။ သတငျးထောကျတှကေလညျး မေးခှနျးတှေ ထပျမေးကွတယျ။ သူတို့မေးခှနျးတှကေို မဖွနေိုငျတဲ့ သူဌေးကွီးဟာ စိတျတိုလာပွီး သူတို့ကို ခုလို ပွောလိုကျပါတယျ။
ဒီအဖွဈအပကျြနှဈခုဟာ ကြှနျတျောတို့ကို မှတျသားစရာ အသိနှဈခု ပေးခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါတှကေ (၁) ဦးနှောကျဆိုတာ အခကျြအလကျတှကေို သိုမှီးသိမျးဆညျးထားရမယျ့နရော မဟုတျပါ။ စဉျးစားတှတေောအကွံထုတျရမယျ့ နရောပါ (၂) စာအုပျထဲမှာ လှယျလှယျကူကူ ရှာလို့ ရတဲာ့ အခကျြအလကျတှကေို ခေါငျးထဲမှာ သိမျးမထားပါနဲ့။ မလိုတာတှေ မှတျထားတာမြားလာရငျ ဦးနှောကျဟာ မတှေးတတျ မစဉျးစားတတျတော့ဘူး။
(ဗနျးမျောသိနျးဖေ) အရမျးလေးစားပါတယျဆရာ။ ဆရာ့စာတှေ နှဈသကျရငျ ဆရာ့စာအုပျမြား ဝယျယူအားပေးကွပါ။
ဘုရားစင်ပေါ်က ဘုရားပန်း မညိုးပါစေနဲ့ သောက်တော် ရေချမ်းမါ် မနွေးပါစေနဲ့
ကျန်းမာလာပြီဖြစ်တဲ့ တောဝက်လေး ၁၃ ကောင်၏ ဝမ်းသာဖွယ်ရာ ပြောစကားများ 😍 ( မြန်မာလိုရေးပေးထားပါတယ် )
အစိုးရဘဏ်ထုတ်မှ ၁၀,၀၀၀ ကျပ်တန်ငွေစက္ကူအတုများ ဖြေရှင်းပေးစေလို